2017年7月 – コンビニ求人Zブログ
【मिनिस्टपको वेब अन्तरवार्ता 】जहिलेपनि जहाँपनि ,३ स्टेपमा अन्तरवार्ता रिजर्व！
★मिनिस्टपको 「वेब अन्तरवार्ता 」को बिस्तृत विवरण〜सरल ३ स्टेपमा अन्तरवार्ता रिजर्व！★
नमस्कार ! यो सुविधाजनक स्टोर विशेषको कामको साइट『कोन्बिनीको काम Z』हो। आजपनि,मिनिस्टपको वेब अन्तरवार्ताको विस्तृत विवरण गर्नेछु !
तपाईंहरुले पार्ट टाईम कामको निवेदन दिने बेलामा,अन्तरवार्ताको दिनहरु कसरि मिलाउदै हुनुहुन्छ? फोनमा सिधै बार्ता गर्ने,इमेल फिर्ता पठाउने आदि,अवस्था अनुसार धेरै पटक यो काम गर्नु पर्ने पनि हुन्छ नि है।
वेब अन्तरवार्ता भएमा,सजिलैसंग 「३ स्टेप 」मा ,स्मार्टफोन अथवा कम्प्युटरको स्क्रिनमा अन्तरवार्ताको रिजर्व पुरा हुन्छ !
＜स्टेप १ ＞
कोन्बिनीको काम Z मा उल्लेख गरेको पसलहरु भित्रबाट,वेब अन्तरवार्ता गर्न मिल्ने पसलको स्क्रिनमा「वेब अन्तरवार्ताको रिजर्व गर्ने」भन्ने बटन हुन्छ।यो बटनलाई थिचेमा हालसालको क्यालेन्डर खुल्छ। अन्तरवार्ता गर्न मिल्ने दिनमा 「◎」चिन्ह लेखिएको हुन्छ। आफ्नो मिल्दो स्थानलाई छान्नुहोस् ।
＜स्टेप २ ＞
इमेल ठेगानालाई रजिस्टर गरिन्छ (डोमेनमा इमेल आउने गरेर सेटिंग मिलाउनु होला )
＜स्टेप ३ ＞
४ आईटमहरूको आधारभूत जानकारीहरु इन्टर गरेर,「रजिस्टर」मा क्लिक गर्नुहोस्।
यो मात्र गरेर अन्तरवार्ताको रजर्व समाप्त हुन्छ ! दिनमा पनि रातमा पनि,आफ्नो भएको समयमा जहिले पनि रिजर्व गर्न सकिने भएकाले,योजना बनाउन पनि सजिलो हुनेछ । अवश्य फाइदा लिनुहोला！
投稿日: 2017年7月31日 2017年7月31日 カテゴリー 雑記
投稿日: 2017年7月27日 2017年7月27日 カテゴリー 雑記
投稿日: 2017年7月25日 2017年7月25日 カテゴリー 雑記
【भियतनामी स्टाफलाई सोधियो 】「ओदेन 」अथवा「मिसिनको सञ्चालन」…कुन कुरा अफ्ट्यारो？
२०१४ सालमा जापान आएर,व्यावसायिक कलेजमा कानुन अनि आईटी बिजिनेस पढेर कम्बिनीमा पार्ट टाइम काम गरिरहेको भिएतनामको हनोई बासिन्दा गुयेन(२२)। यस पटक काम शुरु गरेको समयको संघर्ष कथाको बारेमा सुनौं ।
कम्बिनी भनेपछि भिएतनाममा दुर्लब भई ,जापानमा साधारण कुरा जस्तै जता त्यतै प्रशस्त खोलिएका पाइन्छन,जस्तै 「ओदेन 」अथवा 「खाराआगे」।पहिले यस्तो यथार्त देखेर छक्क परेका रहेछन। विभिन्न प्रकारका खानाका सामग्री र मेन्यु हुने भएकाले बिस्तारै एक एक गरेर याद गरि,ग्राहकबाट आएका अडर बुझ्ने हुदै आए।
साथै,कम्बिनी भित्र विभिन्न किसिमका टिकेट रिजव गर्न मिल्ने साधन राखिएको हुन्छ। स्क्रिनमा देखिने भाषा जापानिज भएकाले यो चलाउन र ब्याख्या गर्न सक्ने हुनको लागि धेरै कठिन भएको थियो।
नबुझेको कुराहरु भएमा पसलको म्यानेजर अथवा अन्य स्टाफ सोधेर,टिपोट गरि धेरै पटक याद गरेका गुयेन,त्यो कोशिशको कारणले अहिले कम्बिनीकोमा भएको समानको कुरा सररर बर्णन गर्न सक्ने बनेका छन्!
「कम्बिनीमा काम गरे पछि,हरेक दिन प्रयोग हुने जापानिज भाषा अथवा ग्राहकलाई बुझ्न सकी,नयाँ समानको बारेमा पनि विस्तृत जानकारी पाइने हुनाले रमाइलो हुन्छ! 」भन्ने गुयेन ,यहाँ बिताउने समय,ब्यस्त दिनहरु बिचमा परि स्पेशल भएको रहेछ।
投稿日: 2017年7月24日 2017年7月19日 カテゴリー 雑記
【भियतनामको स्टाफलाई सोधियो！】「भियतनाममा पसल खोल्ने！」भन्ने सपनाका साथ
कम्बिनिको पार्ट टाइम काम,जापानमा पढ्न एक बिदेशी विद्यार्थीमा परि लोकप्रिय ! यसो भएको हुनाले 『कम्बिनी काम Z』मा ,वास्तवमै जापानको कोम्बिनीमा काम गर्दै गरेको भियतनामी स्टाफको साक्षात्कार गरिएको छ।
भियतनामको हाइफ़ोन्न स्थानको नियामु(२४),२०१५साल ४ महिनामा जापान आएका हुन्।जापानिज भाषाको कलेजमा २ बर्षको अवधि अध्धयन गरि,यो सालको ४ महिनाबाट म्यानेजमेन्ट कलेज भर्ना हुने योजना छ!
『मेईतानते कोनान』अनि『डोरायेमन』,『वान्पिस 』जस्ता जापानका कार्टून अति मन पराउने नियामु 「भियतनाममा रेष्टुरेन्ट अथवा कम्बिनी चलाउन इन्छित ！」भन्ने सपना लिएर हरेक दिन पढाई गर्दै छिन्।
「यस स्थानमा काम शुरु गरेको हुनाले स्टाफहरु मध्यका जापानी साथी बनाउन पनि सक्षम भईन्। सधै आउने ग्राहकहरुसंग पनि राम्रो सम्बन्ध बनि,हरेक दिन विभिन्न विषयका कुरा गर्न सकिने पक्ष पनि रमाइलो हुन्छ।
त्यस्ती नियामु पनि पार्ट टाइम काम शुरु गरेको समयमा कामको कुराहरु नबुझेर संघर्षमय पनि भएको…….के गरेर भाषाको पर्खाललाई नाघेर कामको बारेमा जान्ने बनिन होला । अर्को पटक नियामुको 「बलियो लक्ष」को परिचय गरिन्छ।
投稿日: 2017年7月21日 2017年7月19日 カテゴリー 雑記
投稿日: 2017年7月20日 2017年7月20日 カテゴリー 雑記